Madaxweyne Xasan Sheekh oo qudbad ka jeediyay shirka ururka dalalka Islaamka (OIC)+sawiro – idalenews.com
Madaxweyne Xasan Sheekh oo qudbad ka jeediyay shirka ururka dalalka Islaamka (OIC)+sawiro
R/Wasaare ku xigeenka ahna Wasiirka Arimahha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Marwo Fawziyo Yusuf Aadan,Wasiirul Dowlaha Madaxtooyadda Mudane Faarax Sh. Cabdul-Qaadir, iyo Wasiirul Dowlaha Wasaaradda Arimaha Dibadda Mudane Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa
Madaxweynaha ku wehliyay shirkaan.
Madaxweynaha ayaa qudbadii uu halkaa ka jeediyay uga mahadceliyay dhamaan dalalka Islaamka taageerada ay siiyaan ummadda Soomaaliyeed. Mar uu ka hadlay xaaladda Soomaaliya ayuu Madaxweyne Xassan sheegay in Soomaaliya ay sidii hore ka fiicantahay laakin howl badan ay qabyo yihiin.
Dhinaca amniga ayuu madaxweynuhu waxa uu sheegay in horumar la taaban karo laga gaaray sida burcad badeedii iyo kooxihii nabad diidka ahaa ee Al-Shabaab oo awoodoodii hoos loo riday.
Ugu Danbeyntii ayuu Madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayay kulamo gaar ha la qaateen madax ka socotay dalal kale oo ay ka mid yihiin Isutagga Imaraadka Carabta(UAE), Cumaan iyo dalal kale oo ka tirsan ururkan iyagoo ka wada hadlay sidii xiriirka Soomaaliya iyo dalalkaas loo xoojin lahaa .